မွေးရက်ဇာတိလေးကို တမ်းတမ်းတတလွမ်းနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင် - Cele Connections
မွေးရက်ဇာတိလေးကို တမ်းတမ်းတတလွမ်းနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်
ဂီတလောကမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာတိုင် ပရိသတ်အရွယ်ပေါင်းစုံက တခဲနက်အားပေးချစ်ခင်ကြတဲ့ နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်တစ်ယောက်ကို ဖော်ညွှန်းပြရရင် အားလုံးကစိုင်းစိုင်းလို့ ချစ်စနိုးခေါ်ကြတဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူဟာ အောင်မြင်တဲ့အဆိုတော်တစ်ယောက်အဖြစ် ကျော်ကြားသူတစ်ယောက်ဖြစ်သလို သရုပ်ဆောင်တစ်ယောက်အနေနဲ့ ဇာတ်ကားပေါင်းများစွာကို ရိုက်ကူးနေတဲ့ မင်းသားတစ်လက်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ သူကိုယ်တိုင်ရေးသားသီဆိုခဲ့တဲ့ တေးသီချင်းတွေကလည်း တစ်ပုဒ်ဆိုတစ်ပုဒ်ဆိုသလောက် ပရိသတ်ရင်ထဲစွဲထင်ကျန်ရစ်စေတာပါ။ စိုင်းစိုင်းဟာ အခုချိန်မှာ သူ့ပရိသတ်နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ သဘောကျတဲ့ အလှကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလည်း ထုတ်လုပ်နေသူဖြစ်ပါတယ်။
အခုလိုရာသီပွဲအချိန်တွေရောက်တိုင်း မြန်မာနိုင်ငံဒေသအနှံ့က သူ့ကိုချစ်ကြတဲ့ ပရိသတ်တွေကတော့ သူ့ရှိုးပွဲကို အားပေးဖို့စောင့်မျှော်ကြစမြဲပါ။ တောင်ကြီးဇာတိဖြစ်တဲ့ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားလေး စိုင်းစိုင်းကမကြာသေးခင်က သူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာကနေ “အိပ်မရတဲ့ ညများစွာထဲ .. အိုး မီးရှူးခိုပျံများတွေ့ရင် .. အိမ်ပြန်ချင်တဲ့ စိတ်လေးတားမရဘူး” …. လို့ မျှဝေခဲ့ပါသေးတယ်။ အိမ်ကိုလွမ်းနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းကို သူ့ရဲ့ချစ်ပရိသတ်တွေကတော့ မှတ်ချက်တွေအမျိုးမျိုးနဲ့ အားပေးစကားတွေဆိုခဲ့ကြပါတယ်။
တောင်ပေါ်မြေကို လွမ်းနေတဲ့ စိုင်းစိုင်းတစ်ယောက် အလွမ်းတွေအမြန်ဆုံး ပြေပျောက်ပါစေလို့ ချစ်ပရိသတ်ကြီးနဲ့ ထပ်တူဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ပရိသတ်ရဲ့ချစ်ခင်အားပေးမှုကို ဆယ်စုနှစ်တစ်စုကြာအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ စိုင်းစိုင်းရဲ့ပုံရိပ်လေးတွေကိုလည်း Cele Connections ပရိသတ်ကြီးအတွက် မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
မှေးရကျဇာတိလေးကို တမျးတမျးတတလှမျးနတေဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျ
ဂီတလောကမှာ နှဈပေါငျးမြားစှာတိုငျ ပရိသတျအရှယျပေါငျးစုံက တခဲနကျအားပေးခဈြခငျကွတဲ့ နိုငျငံကြျောအဆိုတျောတဈယောကျကို ဖျောညှနျးပွရရငျ အားလုံးကစိုငျးစိုငျးလို့ ခဈြစနိုးချေါကွတဲ့ စိုငျးစိုငျးခမျးလှိုငျပဲဖွဈပါတယျ။ သူဟာ အောငျမွငျတဲ့အဆိုတျောတဈယောကျအဖွဈ ကြျောကွားသူတဈယောကျဖွဈသလို သရုပျဆောငျတဈယောကျအနနေဲ့ ဇာတျကားပေါငျးမြားစှာကို ရိုကျကူးနတေဲ့ မငျးသားတဈလကျလညျးဖွဈပါတယျ။ သူကိုယျတိုငျရေးသားသီဆိုခဲ့တဲ့ တေးသီခငျြးတှကေလညျး တဈပုဒျဆိုတဈပုဒျဆိုသလောကျ ပရိသတျရငျထဲစှဲထငျကနျြရဈစတောပါ။ စိုငျးစိုငျးဟာ အခုခြိနျမှာ သူ့ပရိသတျနှုတျခမျးနီမလေးတှေ သဘောကတြဲ့ အလှကုနျပစ်စညျးတှကေိုလညျး ထုတျလုပျနသေူဖွဈပါတယျ။
အခုလိုရာသီပှဲအခြိနျတှရေောကျတိုငျး မွနျမာနိုငျငံဒသေအနှံ့က သူ့ကိုခဈြကွတဲ့ ပရိသတျတှကေတော့ သူ့ရှိုးပှဲကို အားပေးဖို့စောငျ့မြှျောကွစမွဲပါ။ တောငျကွီးဇာတိဖွဈတဲ့ ရှမျးတိုငျးရငျးသားလေး စိုငျးစိုငျးကမကွာသေးခငျက သူ့ရဲ့လူမှုကှနျရကျစာမကျြနှာကနေ “အိပျမရတဲ့ ညမြားစှာထဲ .. အိုး မီးရှူးခိုပြံမြားတှရေ့ငျ .. အိမျပွနျခငျြတဲ့ စိတျလေးတားမရဘူး” …. လို့ မြှဝခေဲ့ပါသေးတယျ။ အိမျကိုလှမျးနတေဲ့ စိုငျးစိုငျးကို သူ့ရဲ့ခဈြပရိသတျတှကေတော့ မှတျခကျြတှအေမြိုးမြိုးနဲ့ အားပေးစကားတှဆေိုခဲ့ကွပါတယျ။
တောငျပျေါမွကေို လှမျးနတေဲ့ စိုငျးစိုငျးတဈယောကျ အလှမျးတှအေမွနျဆုံး ပွပြေောကျပါစလေို့ ခဈြပရိသတျကွီးနဲ့ ထပျတူဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ ပရိသတျရဲ့ခဈြခငျအားပေးမှုကို ဆယျစုနှဈတဈစုကွာအောငျ ထိနျးသိမျးထားနိုငျတဲ့ စိုငျးစိုငျးရဲ့ပုံရိပျလေးတှကေိုလညျး Cele Connections ပရိသတျကွီးအတှကျ မြှဝပေေးလိုကျပါတယျနျော။
လူမှုရေးမသိတတ်သူကြောင့် သူ့ရဲ့လျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုကို ထုတ်ပြောလာတဲ့ ကိုပေါက်ရဲ့ အခွီဗီဒီယို
” နှုတ်ခမ်းနီမလေးတွေ အသဲတယားယားနဲ့ ချစ်မဝဖြစ်နေတဲ့ Benjamin Sum ရဲ့ TikTok ဗီဒီယိုဖိုင် “
ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနရဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေကို တစ်သွေမတိမ်းလိုက်နာပြီး ကိုဗစ်ကို ပူးပေါင်းကာကွယ်ပေးနေပါတယ်ဆိုတဲ့ ချစ်သုဝေ
နှလုံးသားရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့ အားငယ်နေတဲ့ ခင်လေးနွယ်